Manameloka ny Fanavakavahana Fivavahana ny Vaomiera any Boligaria
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Chichewa Danoà Espaniola Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Xhosa Yorobà
Nahazo fandresena miavaka ny Vavolombelon’i Jehovah any Boligaria. Manohana ny zo haneho hevitra ilay didim-pitsarana nivoaka, sady miaro ny olona sy ny fivavahana amin’ny fanavakavahana. Hitan’ny Vaomiera Miady amin’ny Fanavakavahana any Boligaria, fa nilaza vaovao tsy marina momba ny Vavolombelon’i Jehovah ny tele iray antsoina hoe SKAT sy ny mpanao gazety roa miasa ao. Nampirisika ny olona hahery setra amin’ny Vavolombelon’i Jehovah koa aza izy ireo. Nilaza io Vaomiera io fa tsy azo ekena mihitsy izany zavatra nataon’ny SKAT izany.
Fandaharana mampirisika ny olona hahery setra sy hankahala fivavahana
Miresaka zavatra tsy marina momba ny Vavolombelon’i Jehovah foana ny fandaharana alefan’ny tele any Boligaria. Ny mpanao gazety ao amin’ny tele SKAT no tena manao an’izany. Voafitaka àry ireo mpijery tele noho izany, ka lasa mieritreritra fa mpanao heloka bevava ny Vavolombelon’i Jehovah. Nalefa nanerana an’i Boligaria ireny fandaharana ireny sady naparitaka tao amin’ny Internet koa.
Nampirisika ny olona hahery setra sy hankahala ny Vavolombelon’i Jehovah ireny fandaharana ireny. Nanome rariny an’ireo nanafika azy ireo sy ny trano fivoriany tao Burgas, ohatra, ny fandaharana iray tao amin’ny tele SKAT, tamin’ny Mey 2011. Nankalaza ny Fahatsiarovana ny nahafatesan’i Jesosy izy ireo tamin’izay, ary nisy andian’olona niditra an-keriny tao amin’ilay trano nivorian’izy ireo. Novonovonoin’izy ireo ny sasany tamin’ireo mpanatrika. Vavolombelona dimy no tsy maintsy nampidirina hopitaly vokatr’izany. Tian’ny tele SKAT hanao hoatr’izany ny olona, ary nasehony tamin’ny fandaharana nalefany tatỳ aoriana mihitsy aza fa tsara hampiharana herisetra ny Vavolombelon’i Jehovah. *
Niharan’ny herisetra matetika ny Vavolombelon’i Jehovah, taorian’ny nandefasana an’ireny fandaharana ireny. Nisy nanimba koa ny efitrano maromaro fivorian’izy ireo. Namoaka lalàna mihitsy aza ny manam-pahefana any amin’ny faritra sasany, mba hanakantsakanana ny asan’izy ireo.
Vavolombelona mivory ao amin’ny Efitrano Fanjakana ao Burgas
Manameloka ny fandikan-dalàna ilay Vaomiera
Nandefa fandaharana enina nanaratsy ny Vavolombelon’i Jehovah ny tele SKAT, tamin’ny 2010 sy 2011. Nametraka fitarainana tany amin’ilay Vaomiera àry ny Vavolombelon’i Jehovah, tamin’ny Febroary 2012. Nohazavain’izy ireo fa nampiasa teny tena manambanimbany ny tele SKAT rehefa niresaka momba ny Vavolombelona. Mila vaniny ry zareo matoa naparitany hatraiza hatraiza ireny fandaharana ireny. Nolazain’ireo Vavolombelona koa fa lasa avakavahana izy ireo vokatr’izany.
Nanome rariny ny Vavolombelon’i Jehovah ilay Vaomiera, tamin’ny 25 Janoary 2016. Hitany hoe nanaratsy azy ireo tsotra izao ny tele SKAT sy ireo mpanao gazety roa miasa ao. Tsy mari-pototra koa ny zavatra niampangany an’ireo Vavolombelona. Niaiky ilay Vaomiera fa natao hanavakavahana ny fivavahan’ny Vavolombelon’i Jehovah ireo fandaharana enina nalefan’ny tele SKAT, ary nanao tsinontsinona ny fitsipika mifehy ny asa fanaovan-gazety ry zareo.
Rehefa nanome sazy azy ireo ilay Vaomiera, dia nanazava fa ‘filam-baniny ilay izy, satria zavatra tsy tian’ny Vavolombelon’i Jehovah sady tsy mifanaraka amin’ny lalàna no natao tamin’izy ireo.’ Tsy hoe afaka manao izay tiany mantsy, hono, ny olona rehefa maneho hevitra. Marina fa zony ny maneho hevitra, nefa tsy mety raha mahery setra izy rehefa manao izany. Nilaza avy eo ilay Vaomiera hoe “tsy azo ekena mihitsy ny zavatra nataon’ireo olona ireo.”
Nanamafy ilay Vaomiera fa tsy azo tsinontsinoavina mihitsy ny fanaratsiana ny Vavolombelon’i Jehovah. Tezitra koa izy io satria tsy mba niaiky ny fahadisoany ny tele SKAT sy ireo mpanao gazetiny, sady tsy nanarina ny tsy nety nataony. Voasazy handoa lamandy betsaka kokoa noho ny mahazatra àry izy ireo, mba hahatsapany fa tena ratsy be ny zavatra nataony.
Mendri-piderana ilay Vaomiera satria tsy nitazam-potsiny
Mankasitraka an’ilay Vaomiera ny Vavolombelona, satria tsy niandany tamin’ireo mpanao gazety manavakavaka sy manendrikendrika izy. Efa nanana olana hoatr’izany tamin’ny fampitam-baovao hafa any Boligaria koa ny Vavolombelon’i Jehovah. Lasa fampitandremana ho azy ireo àry iny didim-pitsarana iny hoe tsy tokony hanely tsaho sy fanendrikendrehana izy ireo.
Hoy i Krassimir Velev, mpitondra tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah any Boligaria: “Hoatran’ny olon-drehetra ihany izahay. Tsy tianay raha misy manely vaovao tsy marina momba anay.” Hoy koa izy: “Naheno an’ilay tsaho daholo anefa ny olona eto Boligaria, ka tokony ho fantatr’izy ireo ny tena marina momba ny Vavolombelon’i Jehovah. Faly izahay fa niezaka nandamina an’ilay olana ilay Vaomiera.”
^ feh. 5 Nalefan’ny tele SKAT indray, tamin’ny 8 Jolay 2015, ilay video mampiseho ny fanafihana ny Vavolombelona tamin’ny 17 Aprily 2011. Tiany hanao hoatr’izay hitany ao amin’ilay video mantsy ny olona sady tiany hankahala ny Vavolombelon’i Jehovah.